Impilo kunye neNdalo @ Levite Villa 302 - I-Airbnb
Impilo kunye neNdalo @ Levite Villa 302
Ruifang District, New Taipei City, I-Taiwan
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguTony & Pauline
I-Levite Villa yindawo yokuhlala ekhethekileyo ebeka ugxininiso olukhulu ekukhathaleleni impilo yabatyeleli kunye nokuphila kakuhle. Yisakhiwo esinemigangatho emine yolwakhiwo lwesitayela saseYurophu esakhiwe ngolwakhiwo lwethambeka. Umphandle uhonjiswe ngamatye kwaye ipentroof imnyama, nto leyo eyenza ukuba ibukeke njengecawa xa ikude.
“UmLevi” ligama lesiHebhere elithetha umanyano. Abanini baseka indawo yokuhlala ukuze babonelele ngendawo efanelekileyo yokuqokelela abahlobo kunye nokwabelana ngolwazi lwezempilo. Ishampu yendalo, iseti yokulala (eyenziwe ngowona mqhaphu ugqwesileyo waseYiputa), kunye nesidlo sakusasa esilungiselelwe ngononophelo kunye nezithako ezitsha ziqinisekileyo zokubonelela iindwendwe ngokuhlala okunempilo kunye nokukhululeka, ngokwenene!
Ngaphaya koko, amagumbi eendwendwe anobungakanani obuhle anamagumbi okuhlambela akwi-en-suite kwaye aneefestile ezijonge imbonakalo yendawo. Unako nokuma kwithambeka leplanga elisisikwemitha ezingama-66 ububanzi kwaye ujonge kwiNtaba yeKeelung entle ngasekhohlo kunye neNtaba yeEarless Pot ngasekunene, kunye nolwandle oludumileyo lweYin Yang oluphakathi kwabo. I-Villa ye-Levite ikufuphi kakhulu neJioufen, iJinguashih kunye nendawo esemantla empuma yeTaiwan.
Umnini ngumkhokeli wabakhenkethi ovunyiweyo kwaye inkqubo yohambo eyenzelwe wena iyafumaneka xa iceliwe. Ukwangumlandeli wemoto omkhulu, ngoko ke umboniso okwigumbi lokungena kumgangatho wesibini ubonisa ingqokelela yakhe equka iimoto eziyimodeli, oololiwe, iinqwelomoya kunye neenqanawa. Ukuhlala e-Levite Villa ayiniki iindwendwe kuphela iholide emnandi, kodwa ikwabavumela ukuba bonwabele kwaye banandiphe enye indlela yokuphila!
Sinikezela ngenkonzo yohambo olujikelezayo simahla ukusuka kwi-Levite Villa ukuya kwindawo nganye phakathi kwe-金瓜石 indawo kanye ngemini ngexesha lokuhlala kwakho.
4.54 · Izimvo eziyi-26
Umbuki zindwendwe ngu- Tony & Pauline
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ruifang District